3 Americans die in cargo plane crash in China - The San Diego Union-Tribune
Security officials stand guard at the crash site of a cargo plane at Pudong International Airport in Shanghai, China, Saturday Nov. 28, 2009. A Zimbabwe cargo plane crashed shortly after taking off Saturday from Shanghai's main international airport, killing three crew members, a government official said. (AP Photo) CHINA OUT (/ AP)
Wreckage lies at the crash site of a cargo plane at Pudong International Airport in Shanghai, China, Saturday Nov. 28, 2009. A Zimbabwe cargo plane crashed shortly after taking off Saturday from Shanghai's main international airport, killing three crew members, a government official said. (AP Photo)
Wreckage lies at the crash site of a cargo plane at Pudong International Airport in Shanghai, China, Saturday Nov. 28, 2009. A Zimbabwe cargo plane crashed shortly after taking off Saturday from Shanghai's main international airport, killing three crew members, a government official said. (AP Photo) (/ AP)
Emergency personnel work at the crash site of a cargo plane at Pudong International Airport in Shanghai, China, Saturday Nov. 28, 2009. A Zimbabwe cargo plane crashed shortly after taking off Saturday from Shanghai's main international airport, killing three crew members, a government official said. (AP Photo)
Emergency personnel work at the crash site of a cargo plane at Pudong International Airport in Shanghai, China, Saturday Nov. 28, 2009. A Zimbabwe cargo plane crashed shortly after taking off Saturday from Shanghai's main international airport, killing three crew members, a government official said. (AP Photo) (/ AP)
Bodies of victims lie at the crash site of a cargo plane at Pudong International Airport in Shanghai, China, Saturday, Nov. 28, 2009. A Zimbabwe cargo plane crashed shortly after taking off Saturday from Shanghai's main international airport, killing three crew members, a government official said. (AP Photo)
Bodies of victims lie at the crash site of a cargo plane at Pudong International Airport in Shanghai, China, Saturday, Nov. 28, 2009. A Zimbabwe cargo plane crashed shortly after taking off Saturday from Shanghai's main international airport, killing three crew members, a government official said. (AP Photo) (/ AP)